Dhammaan wixii ku saabsan GPS iyo qalabka - Geofumadas
Dhammaan wixii ku saabsan GPS iyo qalabka
Boggan waa soo koobid kooban oo ku saabsan mawduucyada ku jira boggan ee ku saabsan GPS iyo Qalabka. Kuma jiraan wararkii ugu dambeeyay.
GPS Mobile Mapper, Promar iyo kuwa kale
Imtixaanka Promark3 ... sawiro kaliya
Halkee laga iibsan karaa GPS
Shirkadaha soo saarista
Daraaseynta xogta leh barnaamijka CAD / GIS
Isticmaalida iyo codsiyada
Kastamka degmada, habkani waa habboon yahay
GPS ee qalabka mobile
GPS size size silsilad muhiim ah iyo telefoonada off-road
Qoraalada kale ee sheega GPS iyo qalabka
13 Jawaabo "Dhammaan wixii ku saabsan GPS iyo qalabka"
Amaury isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan fahamsanahay xaaladdaada, marka muuqaalka guud ee dhulka waa mid aad u Patriots dhab dhacdo xaaladda this raaxo, waxaad tidhaahdaan waa leydi iyo rid kor a at vertex kasta, waa in aynu eegno qaar ka mid ah muuqaalada kale dhul si loo siiyo ra'yi, laakiin dhibic waxaan siin doonaa of view si loo arko haddii wax caawiyaa, mid ka mid kor ku jirta kaalinta ugu sareeya iyo meel u dhexaysa laga yaabaa in ay ku filan, tan iyo 20 km waa meel u dhow qalabka GNSS iyo dar repeaters istaraatiiji ah in meelaha ugu sarreeya, isku dayaya in ay daboolaan meelaha halkaas oo ay jiraan caymis lahayn. In ay ka faa'idaystaan ​​waxa aad hore u leedahay, waxa uu noqon lahaa fiican in la ogaado haddii ay fursad la xisaab Internet mobile meelaha qaarkood, laga yaabee hirgelin karaan isku NTRIP + RAADIYAHA. Wax kasta oo aan tago mail, info@acnovo.com
waxay leeyihiin meel qiyaastii hektar 30000 la xirrira laydi ah 20000 m 15000 m per kooxda, at geesaha leeyihiin ERP NET R9 Trimble (ERP, Joogtada Tracking Station) iyo waxa ay la micno 1 ERP, muuqaalka guud ee dhulka gudaha ah leydiga waa Patriots (ku filan hills), taas oo ka dhigaysa xaalad GPS si ay ula rover RTK signal R10 trimble shaqeeyaan waa laga badiyay, waxaa la fahamsan yahay in meel radio repeater signal GPS. su'aal yahay taas oo la xidhiidha ugu wanaagsan ee RTK sahan, xiriir raadiyaha ee taxanahan ama isku midka ah.
Jose Salas isagu wuxuu leeyahay:
Hambalyo! Waxaan isku dayay inaan ku dhejiyo muuqaal taariikheed oo juquraafi ah oo ku yaala Topta GR5 GPS ururiyaha iyo inaanan muuqan karin. Maxaan sameeyaa?
TATA isagu wuxuu leeyahay:
Hello everybody, waxaan heystaa ght ashtech 120 Waxaan ku dhajiyay shaashadda tifaftirka bilowgii waxaa jira habab dib loo dajiyo ama hagaajiyo
ALEJSN isagu wuxuu leeyahay:
Hambalyo Waxaan ubaahanahay inaan ogaado sida aan u sameyn karo ama xal qaar ka mid ah dhibaatadan weyn.
Waxaan hayaa GPSMAP 62 SC. Waxaan sameeyay sahan leh dhibco iyo sawirada buundooyinka qaar iyo tareennada tareenka oo hadda ma kala soo bixi karo sawirrada ama wax kasta, sidee baan u samayn karaa ama barnaamijkee loo isticmaali karaa tan, sawirradu waxay leeyihiin isku-duwayaal sidoo kale uma soo baxaan inay awood u yeelan karaan inay google eart haddii ay tahay Miyaan rajeyn karaa inay iga caawiso inaan aad kuugu mahadnaqo.
Guillermo Correa Arias isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan soo diri karaa ilmo catalo ah.
Hi Diego, Anigu garan maayo EPOCH ku filan inay ku siiso talo qaar.
Fausto, hubi taariikhda kumbuyuutarkaaga iyo kumbuyuutarkaaga. Ma ahan inaan ku siiyo dhibaatooyin. Noocee software ah ayaad isticmaaleysaa?
Fausto Chicas isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u baahanahay in la ogaado waxa ka dhacaya la software MSTAR potsproceso Magellan Promark X taariikhda oo aan ka yeeli kartaa shaqada i siinaysaa qalad in taariikhaha ka ilaalshay oo hadda isticmaalaan software this si aan sharixi kartaa waxa dhacaya gargaar u baahan.
Waxaan jeclaan lahaa inaan ra'yi ku yeelano GPS L1 EPOCH 10 si sahaminta shaxda ugu sarreeya ee saxda ah iyo isbarbardhigga khariidadda Mobile 10. Waad ku mahadsan tahay
Iyagu waa kooxo aad u wanaagsan, oo aan fiicnayn oo aadan had iyo goor u helin taageero marka aad dhaawac soo gaadho. Waxay kuxirantahay magaalada aad ku nooshahay, laakiin guud ahaan Latin America waxay leeyihiin boos hoose marka loo eego Sokkia, Leica iyo Topcon
BERNARDO isagu wuxuu leeyahay:
Waad salaaman tahay qaali, waxaan ka imid Argentina waxaanan doonayay inaan ogaado fikrada ay u leedahay Stonex iyo noocyada koonfurta inay u qalmaan wadarta saldhigyada. Halkan si aad ah looma yaqaan, markaa waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado, haddii ay iyagu isku dayeen, natiijooyinka ay siisay iyaga ... waxaa xiiso leh in la yeesho fikradda qof horay u soo maray khibrad la shaqeynta noocyadan.